Planina Marshall, Haintany sy Herat · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2017 3:17 GMT
Safrang kosa miresaka momba ny haintany izay namely an'i Afganistana. Nanoratra izy hoe: fanindroany tao anatin'ny folo taona latsaka, niharan'ny haintany i Afganistana. Mampitandrina i Oxfam fa olona 2,5 tapitrisa no miatrika tsy fahampiana ara-tsakafo miverimberina. Miresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fiheverana iraisampirenena izy satria tsy manana fomba hiatrehana ity toe-javatra ity ny governemantan'i Afghanistan.
Nilaza i Demilitarized fa amin'ny vanim-potoanan'i Karzai ao Afghanistan, raha mitady zavatra fahiny momba ny fampandrosoana ianao- aza manalavitra an'i Herat. Nipoitra toy ny tanàna iray miaraka amin'ny firoboroboan'ny fiarahamonim-pirenena i Herat – na izy nipoitra avy any ivelany.